Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Dawooyinka Kansarka ee cusub ee Zantrene waxay ka ilaalisaa wadnaha dhimashada
Wararka Australia • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Caafimaadka Warka
Biotechnoolajiyada Australiyaanka ah iyo shirkadda saxda ah ee Oncology, Race Oncology, ayaa ku dhawaaqday horudhac cilmi baaris ah oo sax ah oo lagu ogaaday in daawadeeda Zantrene® ay awood u leedahay inay ka ilaaliso unugyada murqaha wadnaha dhimashada iyada oo hagaajinaysa dilka unugyada kansarka naasaha marka lagu daro anthracycline, doxorubicin.
Daawada Race Oncology ee Zantrene ayaa muujisay inay ka ilaalinayso unugyada muruqyada wadnaha bini'aadamka dhimashada kemotherabi ee anthracycline ay keentay. Anthracycline's waa daawooyinka ugu isticmaalka badan uguna waxtarka badan ee ka hortagga kansarka, haddana waxay keeni karaan dhaawac halis ah wadnaha.
Cilmi-baadhista saxda ah waxay sidoo kale muujisay awoodda Zantrene ee isku-dhafka anthracyclines ee hadda jira si loo dilo unugyada kansarka naasaha.
Muhiimadda daahfurka awgeed, Zantrene waxaa si degdeg ah loogula socon doonaa rugta caafimaadka iyada oo la adeegsanayo tijaabada Wajiga 2b ee la qorsheeyay 2022 ee bukaannada kansarka naasaha oo halis sare ugu jira dhaawaca wadnaha ee anthracycline.
Waxay bixisaa suurtagalnimada ka-soo-noqoshada bukaan-socodka iyo ganacsiga ee laga helayo qaababka cusub ee Zantrene/anthracycline iyo isku-darka.
Tani waa markii ugu horeysay ee ay daawadu muujiso awoodda lagu beegsanayo kansarka iyo ka ilaalinta wadnaha dhaawaca anthracycline. Daahfurkan ayaa rajo cusub siiya malaayiinka bukaannada kansarka ee adduunka oo dhan lagu maro kiimoterabiga lagu daweeyo anthracyclines oo halis ugu jira dhaawac halis ah oo joogto ah oo quluubtooda ah.
Anthracyclines waxaa si weyn loogu aqoonsan yahay inay yihiin daawaynta ugu waxtarka badan ee ka hortagga kansarka ee waligood la sameeyay waxaana loo adeegsadaa noocyo badan oo kansar ah marka loo eego nooc kasta oo kale oo ah wakiilka ka hortagga kansarka., oo ay ku jiraan leukemias, lymphomas, neuroblastoma, kelyaha, beerka, caloosha, uterineine, thyroid, ugxan-sidaha, sarcomas, kaadiheysta, sambabada iyo kansarka naasaha. Si kastaba ha ahaatee, cabsida laga qabo waxyeelada waxyeelada leh ee anthracyclines ee wadnaha ayaa keentay in dhakhaatiir badan oo ku takhasusay kansarka inay xaddidaan isticmaalkooda daawooyinkan aadka waxtarka leh. Daah-furka jinsiyadu waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka beddelo isticmaalka anthracyclines iyada oo u oggolaanaysa dhakhaatiirta kansarka in ay isticmaalaan daawooyinkan xoogga badan si ay u helaan awooddooda buuxda ee ka hortagga kansarka iyaga oo aan ka baqin dhaawac joogto ah oo wadnaha ah.
Zantrene® Barnaamijka cilmi baarista badbaadada wadnaha waxaa hogaaminaya cilmi-baarayaal caan ah oo ku takhasusay wadnaha, Associate Professor Aaron Sverdlov iyo Doan Ngo, iyagoo kaashanaya saynisyahanka kansarka Associate Professor Nikki Verrills, oo ka tirsan Jaamacadda Newcastle.
Professor Aaron Sverdlov ayaa yiri: "Ilaa hadda, fikradda daawaynta kansarka ee suurtagalka ah ee aan ahayn kaliya kuwa aan wadnotoxic ahayn, laakiin, dhab ahaantii, ilaalinta wadnaha-ilaalinta lama qiimeyn ama xitaa madadaalo, oo ay ugu wacan tahay hababka gaarka ah ee cudurrada ee daryeelka caafimaadka. Natiijooyinkayagu waxay soo jeedinayaan in Zantrene, oo ah daawada waxtarka leh ee ka hortagga kansarka, ay si wada jir ah uga ilaalin karto saamaynta sunta ah ee wadnaha mid ka mid ah wakiilada kemotherabi ee inta badan la isticmaalo, doxorubicin. Tani waa caddayntii ugu horreysay ee nooceeda ah si ay u muujiso inay jirto daawayn labaduba bartilmaameedsanaya kansarka oo ilaaliya wadnaha! Tani waxay awood u leedahay in ay wanaajiso natiijooyinka caafimaad ee bukaannada kansarka ee aan la tirin karin iyo kuwa badbaaday iyaga oo labadooduba hagaajinaya daaweyntooda kansarka iyaga oo ka hortagaya horumarinta cudurrada wadnaha iyo xididdada."
Iyadoo tani ay tahay daahfur cusub oo xiiso leh, Zantrene® (bisantrene dihydrochloride) waxay leedahay taariikh caafimaad oo dheer, iyadoo la sameeyay 1970-meeyadii sidii wadne ka beddeshay anthracyclines kahor ansixinta Faransiiska 1990-meeyadii. Halka badbaadada wadnaha ee Zantrene lagu xaqiijiyay in ka badan 50 tijaabo oo caafimaad, , Su'aasha ah in Zantrene uu ka caawin karo ka hortagga dhaawaca wadnaha ee ay keento anthracyclines waligiis lagama hadlin.
Isagoo ka faalloonaya natiijooyinka cilmi-baarista cusub, Madaxa Sayniska ee Race, Dr Daniel Tillett wuxuu yiri: "Si aad u ogaato in Zantrene uu wadnaha ka ilaalin karo kiimoterabiga isagoo sidoo kale si ka wanaagsan u dilaya kansarrada waa natiijada 'labada adduun ee ugu wanaagsan' ee aan caadi ahayn. Marka la eego anthracyclines waxaa loo isticmaalaa malaayiin bukaannada kansarka ah sannad kasta, way adag tahay in la dhaafo awoodda caafimaad iyo ganacsi ee horumarkan!"
Qaabkan saxda ah, Zantrene wuxuu ka ilaaliyaa unugyada muruqa wadnaha waxyeelada doxorubicin iyadoo la kaashanaysa anthracyclines si ay si wanaagsan u dilaan unugyada kansarka naasaha.
Race waxa uu soo gudbiyay codsi patent ah oo ka hadlaya isku dhafka Zantrene iyo anthracycline ee ilaalinta wadnaha bukaanka. Ruqsaddan (haddii la bixiyo) waxay bixinaysaa ilaalinta isku darka daawada iyo isticmaalkeeda caafimaad illaa 2041.
Helitaankan cusub ee ilaalinta wadnaha ayaa si degdeg ah loogu gudbi doonaa rugta caafimaadka. Taariikhda caafimaad ee ballaaran ee Zantrene waxay u oggolaaneysaa isku-dhafkan inuu si degdeg ah u horumariyo bukaan-socod ahaan.
Wadahadallo heersare ah ayaa ka socda dhakhaatiirta Australia si ay u socodsiiyaan tijaabada caafimaad ee Wajiga 2b ee bukaannada kansarka naasaha oo halis weyn ugu jira dhaawaca wadnaha ee anthracycline ay sababtay.
Daahfurkaani wuxuu u furayaa fursado cusub oo suuqa Zantrene oo la mid ah kiliinikada iyo kartida ganacsi ee helitaanki hore ee ah in Zantrene uu yahay horjooge awood leh oo FTO ah.
Daraasaadka xoolaha oo lagu wado Q4 CY2021/Q1CY2022.
Daraasado dheeraad ah oo caafimaad oo dheeraad ah si loo baaro haddii Zantrene uu ka ilaalin karo wadnaha waxyeellada daawooyinka kale ee kiimikaad kuwaas oo sidoo kale loo yaqaan inay keenaan waxyeelo wadnaha.
Daraasado dheeraad ah oo lagu ogaanayo habka molecular ee dhaqdhaqaaqa ilaalinta wadnaha ee Zantrene. Tani waxay ogolaan kartaa aqoonsiga hawlaha ilaalinta dheeraadka ah ee Zantrene.
Horumarinta daawooyinka isku-darka ah ee cusub iyo kuwa la hagaajiyay oo leh qiime caafimaad iyo mid ganacsi oo la hagaajiyay.
Bilawga tijaabada caafimaad ee kansarka naasaha ee wajiga 2b sanadka 2022.